Pano pane rwendo rweCardi B anonyanya kuteerera rapper yenguva - Tamban RELAY
Pano pane rwendo rweCardi B anonyanya kuteerera rapper yenguva
Mune rejista renyika, Belcalis Marlenis Almanzar. Akazvarwa muNew York muna Gumiguru 11, 1992, muBronx, Cardi B ndeyeAmerica rapper nebasa rinopenya.
Paaive achiri kuyaruka, akange ari cashier musupamaketi, uye aive stripper aine makore 19.
Akazopinda muBorough yeManhattan Community College asati asiya chikoro, sezvo aisagona kuyananisa zvidzidzo zvake uye basa rake sebasa. Cardi B ainyepa kuna mai vake nekuvaita kuti vatende kuti vaiita mari kubva mukuviga.
Cardi B akazozivikanwa pa Instagram pamavhidhiyo ake mapfupi, kwaanoshandisa mutauro wakasvibira, pasina kuoma.
Cardi B akatanga kuzviitira mukurumbira mumhanzi muna 2015, aine remix ya "Boom boomKubva kuna Shaggy. Pamusoro peizvozvo, ruzhinji rwunomufumura pachiratidziro chaicho "Rudo & Hip Hop New York ”.
Musi waKurume 7, 2016, akaita mixtape yake yekutanga yakanzi "Gangsta B Music, vol 1 » yakaburitswa munaKurume 7, 2016. Uye mugore rimwe chetero akaita yechipiri mixtape: "Gangsta B Music, vol 2 ”.
Muna Chivabvu 2017, akasarudzwa kuti apiwe maBET Awards mumhando dzeBest Emerging Artist uye Best Female Hip-Hop Artist, asi haana kuhwina kana imwe yematanda maviri.
Asi kubwinya kwake kwaive pedyo, nekuti pana June 16, 2017, akaburitsa imwe yake "Bodak Yellow " iyo inosimbiswa kanokwana mashanu platin muUnited States.
Kubva ipapo, Cardi B akangoita dzakateedzana nenyeredzi huru dzemimhanzi yeAmerica. Chii chakamuwanira iye awards ake mazhinji ayo ari:
Mubairo weGrammy Award, Manomwe Bhodheti Mimhanzi YeMhanzi, Shanu dzeGuinness World Records, Makumi mana eMimhanzi Ezvikepe, Makumi mana, MTV Vhidhiyo Music Award, Makumi mana BET uye gumi nerimwe BET Hip Hop Award. Uye zvakare mubairo weASCAP wemunyori wenyaya wegore ra2019.
Cardi B anosara kwemakore matatu ikozvino anonyanya kuteerera kuAmerican rapper shure kwaNicki Minaj. Vanhu vazhinji vanofarira kuchengetedza nziyo dzakanaka dzeCardi. Uye iwe, unoifarira here?
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://afriqueshowbiz.com/cardi-b-voici-le-parcours-de-la-rappeuse-am Americaine-la-plus-ecoute-du-moment/
Makore makumi maviri nemashanu ekubhinya musikana ane makore gumi nematatu-mupaka, anobva aburitswa